ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာရရှိသော သူတို့အဖို့ လောကနှင့်ဆိုင်သောကောင်းကြီးများ| Real Conversion
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊
တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌
ဖြောင့်မတ်သောသူ သီးသောအသီးသည် အသက်ပင်အသီးဖြစ်၏၊၊ သူတပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ရသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်၏။ (သုတ္တံကျမ်း ၁၂း၃၁)၊၊
ဤဒေသနာတော်သည် ၊ ဒေါက်တာရိုက်စ်၏ စာအုပ်ထဲက အဆီအနှစ်များကို ကောက်နုတ် တင်ဆက် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (The Golden Path to Successful Personal Soul winning.(John R. Rice D.D. Sword of the Lord Publishers, 1961, PP. 275 – 296).
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မြောက်များစွာ ဖမ်းဆီးသောခရစ်ယာန်စစ်၊ ခရစ်ယာန်မှန်များအဖို့ ကောင်းကြီး များစွာရှိပါသည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအား ဂရုမစိုက်သောသာမန်ခရစ်ယာန်များအဖို့ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာမရှိပေ။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိခြင်းမရှိသောအသင်းသူ^သားများသည် ခရစ်ယာန်အစစ် အမှန် မဟုတ်၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ဖေါ်ပြထားသော ကတိတော်ကောင်းကြီးများကို မခံစားရပေ။ သမ္မကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားသော ရွှင်လန်းစွာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလည်း မခံစားရပေ။ ထိုမျှမကပဲ မိမိဆုတောင်းသည့်အတိုင်း လည်း ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာကို ရသောသူတို့အဖို့အတွက်သာ ကတိတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးတည်လျှက်ရှိသည်။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည်လည်း ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် ကိုရသောသူလောက် မင်္ဂလာမရှိပေ။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို အသက်ပေးကာကွယ်နေသူသည်လည်း ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကို ရသောသူလောက် မမွန်မြတ်ပေ။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အသက်ပေးဆပ်ရ သည့်တိုင် မာတုရအသေခံသော်လည်း ပျော်ကဆုံးဝိညာဉ်ကိုရသောသူလောက် မမွန်မြတ်ပေ။
“ဖြောင့်မတ်သောသူ သီးသောအသီးသည် အသက်ပင်အသီးဖြစ်၏၊၊ သူတပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ရသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်၏။ (သုတ္တံကျမ်း ၁၂း၃၁)၊၊
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုရသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်၌ ဆုလဒ်သရဖူ မြောက်များစွာ အပ်နှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ ထိုအရာသည် စောင့်ရပါအုံးမယ်။ ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိလျှက် ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ် ရှာဖွေသောသူတို့အဖို့ ဤလောကအရာနှင့်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် - ယခုပင် ထိုသူတို့အဖို့ သိုထားလျှက်ရှိသည်။
၁။ ပထမ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် အမွန်မြတ်ဆုံးသော ခရစ်ယာန် ယုံကြသည်သူ ဖြစ်သည်။
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးရရှိသော သူတို့သည်လည်း ပြီးပြည့်စုံသူများမဟုတ်ကြ၊ အင်အား ချိနဲ့သော သာမန်ခရစ်ယာန်များထဲကပင် ဖြစ်ကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း အချို့သောအမှုတော်ဆောင်များက အခြားသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူထက် သာလွန်သောသူလည်း ရှိပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးရရှိသောသူတို့သည် အခြားသော အသင်းသူ^သားတို့ထက် သာလွန်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ယေရှုဘုရားကြွလာခြင်းသည် “ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှါ ကြွလာ သည်”ဟု (ရှင်လုကာ ၁၉း၁၀) ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် “အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသည်”ဟု (၁တိမောသေ ၁း၁၅)၌ ထပ်မံ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုဘုရားပြုသကဲ့သို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သောသူကို ယေရှုဘုရားသည် ကျေနပ်အားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့ သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသောသူအား ယေရှုဘုရား ကျေနပ်အားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ “ယနေ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ရိတ်သိမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။” အောက်၌ရေးထားသော ဓမ္မသီချင်း သီဆိုသည်။
ယနေ့သည် အပြစ်သားများကို ခေါ်ဆောင်ရန်သွားကြပါကုန်
(၁၈၉၅-၁၈၉၀၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး “အချိန်အနည်းIယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပါ”)
“ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသောသူတို့၏ အပြစ်(၇)မျိုး” သည် ဒေါက်တာရိုက်စ် ၏ ကျော်ကြားသောတရားဟောချက်ဖြစ်သည်။ ဤဒေသနာတော်ထဲ၌ အပြစ်စာရင်းဇယား ပြုစုဖေါ်ပြထား ခဲ့သည်။ အောက်ပါတို့သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသောသူတို့၏ အပြစ်များပင်ဖြစ်သည်။
၁။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ မဟာစေခိုင်းချက်ကို ငြင်းဆန်သောအပြစ်၊
သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊သားတော်၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့” (ရှင်မဿဲ ၂၈း၁၉-၂၀)
ထို့ကြောင့် အသစ်သောသတ္တါတို့သည် တမန်တော်တို့အား ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသော မဟာ အမိန့်တော်ကို သင်ကြားခံယူဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုရပါမည်။ အသစ်သော အသက်တာ၌ လျှောက်လှမ်း သူတို့သည် ခရစ်တော်၏ စေခိုင်းချက်အတိုင်း ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးရပါမည်။ ဤသည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့အဖို့ အမိန့်အာဏာပင်ဖြစ်သည်။
၂။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်းမရှိသောအပြစ်၊ ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့” ဘြွမ ။ရြွညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး(ယောဟန် ၁၄း၁၅)
“ငါ့ပညတ်တို့ကိုရ၍ စောင့်ရှောက်သောသူသည် ငါ့ကိုချစ်သောသူဖြစ်၏” (ယောဟန် ၁၄း၂၁)
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏ မဟာစေခိုင်းချက်ကို လိုက်နာ ဆောင် ရွက်ခြင်း မရှိခြင်းသည် ခရစ်တော်ယေရှုကို မချစ်သည်နှင့် အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။ ပျောက် ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းမရှိပဲ ယေရှုဘုရားကိုတော့ ချစ်ပါတယ်ဟု သင်ပြော ကောင်းပြောပါမည်။ တကယ်တန်းကျတော့ ဘုရားကိုချစ်ပါက သူ့အမိန့်ကို နာခံ ကြရမည် မဟုတ်ပါလား။
ရှင်မဿဲ ၄း၁၉ ၌ ယေရှုက “ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့ ငါသည် လူကိုမျှားသောတံငါသည် ဖြစ်စေမည်ဟု” မိန့်တော်မူပါသည်။ ရှင်မာကု ၁း၁၇ တွင်လည်း ယေရှုက “ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြလော့။ လူကိုမျှားသောတံငါသည် ဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်” ပို၍ရှင်းလင်းသည်မှာ ခရစ်တော်ယေရှုနောက် လိုက်ခြင်းက ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်းများဖမ်းဆီးရန် ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း မရှိခြင်းက ကျမ်းစာတော်အရ ခရစ်တော်နောက် မလိုက်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
၄။ ခရစ်တော်အထဲ၌ တည်နေခြင်းမရှိသောအပြစ်
ရှင်ယောဟန် ၁၅း၅ ၌ ယေရှုက “အကြင်သူသည် ငါ၌တည်၍ ငါသည်လည်း သူ၌တည်၏။ ထိုသူသည် များစွာသောအသီးကိုသီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ” ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်။ ဤနေရာတွင် ယေရှုက “ဝိညာဉ်တော်၏ အသီး” ကို ဆိုလိုနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ဦး၏ အ သီးအပွင့်ဟူသော အခြားသောသူတို့ကို ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မက်မွန်းသီး၊ ပန်းသီးနှင့် လိမ္မော်သီးတို့သည် သစ်ပင်၏ အသီး များဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့၏ အသီးအပွင့်သည် အခြားသော သူတို့အား ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ပင်က လိမ္မော်သီးကို သီးမည်။ ပန်းသီး ပင်သည်လည်း ပန်းသီးကို သီးမည်သာဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တို့၏ အသီးမူကား သူတပါးဝိညာဉ်ကိုရပြီး ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေခြင်းပေတည်း။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်သည့်အခါတွင် ဘုရားသခင်က “သားယဉ် တို့ကို၎င်း၊ တွားတတ်သော တိရိစ္ဆာန် တို့ကို၎င်း ပေါက်ပွားစေဟု အမိန့်တော်ရှိသည်။” (ကမ္ဘာ ၁း၂၄)။ ဤစစ်မှန်သော အမျိုးတူ ပေါက်ပွားခြင်းသည် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်၏။ “မိမိတို့လူမျိုးတူ၊ ဇာတ်တူ ပေါက်ပွားခြင်းက စစ်မှန်သောအသစ်ပြုပြင်ခြင်းမည်၏။ မှားယွင်းသောသူတို့နှင့် သာမန် ခရစ်ယာန် ခေါင်းဆောင်များက ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးကြသော်လည်း အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ ထိုသူတို့က ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးကြပြီး “ဇာတိပကတိ အသွေးအသားလူကိုသာ ပေါက်ပွားစေကြသည်” ဖါရိရှဲတို့ကဲ့သို့ “လူတစ် ယောက်ကိုပင် ဘာသာတရားသွင်းခြင်းငှါ ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း ပတ်ပတ်လည် လှည့်လည်၍ ဘာသာသွင်းပြီးသော သူတို့ကိုလည်း မိမိတို့ထက် နှစ်ဆသော ငရဲသားဖြစ် စေကြ၏”ဟု (ရှင်မဿဲ ၂၃း၁၅) ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အသွင်တူဥပဒေသည် “မိမိဇာတိကို သာပေါက်ပွာသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည် ပျောက်ဆုံးလူသားတို့သည် ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များကိုသာ မွေးထုတ်ကြ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အခြား သော အသင်းတော်၌ဖြစ်စေ တွေ့ရပါသည်။ “အကြင်သူသည် ငါ၌တည်၍ ငါသည်လည်း သူ၌တည်၏။ ထိုသူသည် များစွာသောအသီးကို သီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ”ဟု (ရှင်ယောဟန် ၁၅း၁၅)၌ ဖေါ်ပြပါသည်။
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကြားလျှက် တပါးသူတို့အား ဝေငှလိုချင်စိတ်မရှိသောသူသည် မထီမလေးစားပြုသူနှင့် ဆိုးညစ်သောသူဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် လေးစားခြင်းမရှိ သတင်းကောင်းဝေငှရန် အကြွေးတင်သူဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မိမိငယ်သားတို့အား ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ပေးအပ်သော အရှင်သခင် က “ဆိုးညီးပျင်းရိသောငယ်သား” ဟူ၍ (ရှင်မဿဲ ၂၅း၂၆) အပြော ခံရခဲ့သည်။ ရယူပြီး ပေးခြင်းမရှိ ခြင်းသည် မလေးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပျောက်ဆံးဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသော အသင်းသူ^သား များတို့သည် မလေးစားသောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသူများဖြစ်ကြသည်။
သူတစ်ပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်သည်ဟု (သုတ္တံ ၁၁း၃၀)၌ ဖေါ်ပြသည်။ “ပညာရှိသူတို့သည်လည်း ကောင်းကင်မျက်နှာကြက်၏ အရောင်အဝါ ကဲ့သို့၎င်း၊ လူများတို့ကို ဖြောင့် မတ်ခြင်း တရားလမ်းထဲသို့ သွင်းသောသူတို့သည်လည်း ကြယ်များကဲ့သို့၎င်း အစဉ်အမြဲ ထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်။ (ဒံယေလ ၁၂း၃)။ ဝိညာဉ်များစွာ ကို ရရှိသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကို ဆည်းဖူးသော သူလည်းဖြစ် သဖြင့် ထာ၀ရကောင်းကင်သရဖူကို အပ်နှင်းခြင်းခံကြရပါမည်။ သို့ပါသော် လည်း အဝေး မှုန်နေသော အသင်းသူ^သားများသည် သူတပါးဝိညာဉ်ကို ရှာဖွေရရှိသောသူ မဟုတ်ကြ သဖြင့် ပညာရှိမဟုတ်ကြပါ။ မိုက်မဲသောသူဖြစ်၏ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော် မူသည်။
ပရောဖက်ယေဇေကျေလ၏ သတိပေးစကားသံကို နားထောင်းကြပါအောင်
“သင်သည် အမှန်သေလိမ့်မည်ဟု လူဆိုးအား ငါပြောလျှက်နှင့် သင်သည် သတိမပေး၊ လူဆိုးအား သတိပေးသောစကားကို မပြောဘဲနေလျှင် ထိုလူဆိုးသည် မိမိအပြစ်၌ သေလိမ့်မည် သူ၏အသက်ကိုကား သင်၌ ငါတောင်းမည်” (ယေဇကျေလ ၃း၁၇ -၁၈)။
ယေဇကျေလ အစီရင်ခံသကဲ့သို့ လူဆိုးတို့၏အသက် ချမ်းသာအဖို့အလို့ငှါ သတိပေးခြင်း မရှိပါက သင်၌ ထိုအသက်ကြွေးကို တောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်တိုင်း၌လည်း အသက်ဖိုးတောင်းပေလိမ့်မည်။ မိမိ၏အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေအား သတိ ပေးခြင်း မရှိပဲ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါက သင်ထံ၌ ထိုသူ၏အသက်ဖိုးကို ခရစ်တော်ဘုရား၏ တရားစီရင်ချိန်တွင် သင့်အသက်ကို ပေးရပါလိမ့်မည်။ “ယနေ့ရိတ် သိမ်းကြစို့”ဟူသော ဓမ္မသီချင်း သီဆိုသည်။
“ဖြောင့်မတ်သောသူ သီးသောအသီးသည် အသက်ပင်အသီးဖြစ်၏၊၊ သူတပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ရသောသူသည် ပညာရှိဖြစ်၏။” (သုတ္တံကျမ်း ၁၂း၃၁)၊၊
၂။ ဒုတိယ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် ခရစ်တော်နှင့်အစဉ်မပြတ် အမြဲအတူ ရှိသူဖြစ်သည်။
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရရှိသောသူသည် ဤလောက၌ပင်လျှင် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားရ၏။ ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရ၏။ သက်ထောင့်သက်သာရာ အမြဲခံစားရသူဖြစ်ကြ၏။ ပျောက် ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသောသူ၌ ထိုသို့သော ကျေးဇူးမရှိပေ။
မဟာစေခိုင်းချက် ကျမ်းပိုဒ်အဆုံးတွင် ယေရှုက “ငါသည် ကပ်ကမ္ဘာကာလ ကုန်သည့် တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟု” (ရှင်မဿဲ ၂၈း၂၀)၌ ဖေါ်ပြထား ပါသည်။
ထိုကတိတော်သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖွေနေသောသူတို့၌သာ ကတိတည်လျှက်ရှိသည်။ ကတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အကမ်းတဝင်ရှိခြင်း၊ ရင်းနှီးမိတ်သဟာယရှိခြင်း၊ ဘေးမဲ့လုံခြုံကွယ် ကာခြင်းနှင့် အောင်မြင်ခြင်း စသည်တို့သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖွေဖမ်းဆီးသူတို့အဖို့ တည်လျှက် ရှိသည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရရှိသောသူတို့သည် ယေရှုဘုရားနှင့် အကမ်းတဝင် မိတ်သဟာယရှိသော ကြောင့် အမှုတော်အတွက် စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် မေတ္တာဖြင့် လွှမ်းခြုံထား၏။ ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကို ထူးခြားစွာ ခံစားစေ၏။ “ယနေ့ရိတ်သိမ်းကြပါစို့” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ပြန်လည် သီဆိုကျူးဧသည်။
၃။ တတိယ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ကျေးဇူး ကောင်းကြီးခံစားသောသူ ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်စွာအသက်တာပြောင်းလဲသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်၀ကြပြီး သာသနာအမှုတော်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ထိုသူတို့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်းကို ခံကြရသည် (ရှင်ယောဟန် ၁၆း၇-၁၁) ။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ တိုင်းသည် “ဝိညာဉ်တော်နှင့် အသစ်မွေးဖွါးကြသူများဖြစ်သည်။” (ရှင်ယောဟန် ၃း၆)။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့အဖို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှစ်သိမ့်ခွန်အားပေးသောအရှင် ဖြစ် သည်။ ထိုမျှမက သွန်သင်မှုပေးသူနှင့် ဆုတောင်းသောအခါ မစသောအရှင်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန် သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့နှင့်အတူ ဝိညာဉ်တော်သည် ကိန်းဝပ်လျှက်ရှိသည် (၁ကော ၆း၁၉-၂၀၊ ရောမ ၈း၉)။
စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးတော်သည် အမှုတော်မြတ်အတွက် ထင်ရှားလျှက်ရှိပါသည်။ ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့ ကျရောက်သောအခါ “ထိုသူ အပေါင်းတို့သည်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်၍”ဟု (တမန် ၂း၄)၌ ဖေါ်ပြ၏။ ထိုသူတို့သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် ရဲဝံ့စွာသက်သေခံဝေငှကြလျှက် ထိုနေ့၌ လူပေါင်း ၃၀၀၀ အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ နောက်မကြာမှီ၌ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်၀ကြ၏။ “ထိုသူအပေါင်းတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့် “ ဟူ၍ (တမန် တော် ၄း၃၁)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုသူတို့သည် များစွာသောဝိညာဉ်များကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဗာနဗအကြောင်းကို ပြောလိုပါသည်။ “ထိုသူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်၎င်း ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်း ပြည့်စုံသောအားဖြင့် လူများအပေါင်းတို့သည် သခင်ဘုရားထံသို့ ဝင်စားကြ၏။ (တမန်တော် ၁၁း၂၄) တွင် ဖေါ်ပြ၏။ သေချာသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှင့် ပြည့်သောသူတို့ကသာလျှင် မိမိတို့၏အသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံလျှက် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ကြသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ တွေ့ရပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ လာသည်ကား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အမှုတော်မြတ် အတွက် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာတွင် ကူညီမစလျှက်ရှိသည်ဟုလာ၏။ သာမန် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူတို့၌ ထိုသို့သော ထူးခြားသောဝိညာဉ်တန်ခိုး မသက်ရောက်ပေ။ “ရိတ်သိမ်းကြပါစို့” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုကျူးဧပါသည်။”
၄။ စတုတ္ထ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူတို့သည် တပါးသူထက် ရွှင်လန်းစွာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားသောသူသည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရရှိသောသူတို့အဖို့ ကြီးမား သော စိန်ခေါ်မှုရှိသလား၊ အကျွန်ုပ်၌ အမှန်တကယ် ရှိပါသည်။ ဆာလံ ၁၂၆ အပိုဒ်ငယ် ၅ မှ ၆ ကို ဖတ်ကြည့်ပါက
]မျက်ရည်ကျလျှက် မျိုးစေ့ကြဲသောသူတို့သည် ရွှင်လန်းလျက် စပါးရိတ်ကြလိမ့်မည်။ မျက်ရည် ကျလျှက် ကြဲရန်မျိုးစေ့ကို ဆောင်၍ ထွက်သွားသောသူသည် ကောက်လှိုင်းများ ကိုဆောင်လျှက် ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့် အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်” (ဆာလံ ၁၂၆း၅-၆)
ငရဲမီးမှ ဝိညာဉ်တစ်ပါး ကယ်နုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဘဏ်မှဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထုတ်ယူခြင်းထက် သာလွန်ကောင်းမြတ်ပေသည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွား ရရှိသောသူတို့သည် လောကလူသားတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုတဘက် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားကြရသည်။
ဒေါက်တာရိုက်စ် ဝန်ခံပြောကြားသည်မှာ “ကျွန်ုပ်၌ လောကအရာ ကောင်းမွန်ခြင်းဟူ၍ မရှိပါ”ဟု အကျွန်ုပ်သည် အပေါ်ယံဆန် (ခရစ်ယန်အတွေးအခေါ်ဝါဒ) နှင့် မယုံကြည်သူတို့၏ အပြစ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး တရားဒေသနာ ဝေငှခဲ့သဖြင့် ထိုသူတို့သည် အကျွန်ုfပ်အား မုန်းတီးကြပြီး ထိုဆရာကြီးမရှိမှပဲ ဤနိုင်ငံ အတွက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပွားများလာမည်ဟုပင် ဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မဟုတ်မမှန်ဘဲလျှက် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသည်အထိ စွပ်စွဲပြောဆို ခံရသည်။ သို့တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသားသည် ကျွန်ုပ်၏ သာသာနာကွင်း၌ရှိ လူတို့၏ စိတ်ခံစားချက်ထက်သာလွန်၍ အမြော်အမြင် မြင့်မားမှုကြောင့် မြောက်များစွားသောလူတို့သည် ခရစ်တော်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခွင့် ရရှိကြပါသည်။ ဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူတို့၏ ဝမ်း မြောက်ခြင်းသည် အခြားသောသူတို့ထက် သာလွန်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်၏သက်သေဖြစ်ပါစေဍ ကျွန်ုပ်၏သာလွန်သောအသိပညာ အမြော် အမြင်အားဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော သူတို့သည် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီပြီးရဖို့ထက် ခရစ်တော် သခင်ထံ အသက်တာ ပြောင်းလဲချဉ်းကပ်လာဖို့ လိုချင်တောင့်တနေသည်ကို အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရ သည်။ အိုဍ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် များစွာ ရရှိသောသူတို့အဖို့ အံ့ဩဖွယ်ပါလား “ရိတ်သိမ်းကြ ပါစို့” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုကျူးဧသည်။
ယနေ့တွင် အပြစ်သားများကို ခေါ်ဆောင်ရန်သွားကြပါကုန်
စစ်မှန်ပြောင်းလဲသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့အဖို့ ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါ၏။ ပျောက်ဆုံးနေ သူများ ခရစ်တော်သခင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ရန် ကူညီစေလို၍ ဤတရားကို ဆက်၍ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။ မိတ်ဆွေ သင်မပြောင်းလဲဘူးမဟုတ်လား။ သင့်အပြစ်အတွက် နောင်တရလျှက် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါလား၊ ခရစ်တော်သခင်နှင့်လည်း ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ခြင်းမရှိသေးဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်မိသားစုထဲ ပါဝင်လာပြီး အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဘုရားထံ တိုးဝင်းချဉ်းကပ်လာဖို့ အမြဲတစေ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ သင့်အပြစ်အခ သေခြင်းအတွက် ကားတိုင်ပေါ် ယေရှုဘုရားအသေခံပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူပြီး ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက် စံမြန်း၍ တတိယကောင်းကင်ဘုံ၌ ထိုင်နေတော်မူပြီ။
ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေသစ်များ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့အား သနားကြင်နာလျှက် ချစ်ခင်ရင်းနှီး စွာဖြင့် မိတ်ဖွဲ့ပါ၏။ သင်တို့အဖို့ ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပေးနေပါ၏။ ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိလျှက် သင့်အသက်တာ အသစ်တဖန် ယေရှုသခင်ထံ ပြောင်းလဲလာဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိတ်ဆွေအသက်တာ ပြောင်းလဲလာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံ အသနားခံ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ အာမင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်တို့ ဓမ္မသီချင်းစာအုပ် အဆုံးက ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
စပါးရှင်ယေရှုထံမှ လုပ်အားခကို ခံကြရမည်
အပြုံးနှင့်ဆီးကြိုလျှက် သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း
ယနေ့ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် သင့်အားပေးသနားတော်မူ၏
(၁၈၉၅-၁၉၈၀၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်(စ်) သီကုံးသော
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ သုတ္တံ ၁၁း၂၈-၃၁ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
( ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက် ၁၈၉၅ -၁၉၈၀)
၁။ ပထမ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာရရှိသောသူသည် အမွန်မြတ်ဆုံးသော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူ ဖြစ်သည်။ ရှင်လုကာ ၁၉း၁၀၊ ၁တိ ၁း၁၅၊ ရှင်မဿဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ ယောဟန် ၁၄း၁၅-၂၁၊ မဿဲ ၄း၁၉၊ ရှင်မာကု ၁း၁၇၊ ယောဟန် ၁၅း၅၊ ကမ္ဘာဦး ၁း၂၅၊ ရှင်မဿဲ ၂၃း၁၅၊ ၂၅း၂၆၊ ဒံယေလ ၁၂း၃၊ ယေဇကျေလ ၃း၁၇-၁၈။
၂။ ဒုတိယ ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် ခရစ်တော်နှင့် အစဉ်မပြတ် အမြဲအတူရှိနေသူ ဖြစ်သည်။ ရှင်မဿဲ ၂၈း၂၀။
၃။ တတိယ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ကျေးဇူး ကောင်းကြီး ခံစားသောသူဖြစ်သည်။ ရှင်ယောဟန် ၁၆း၇-၁၁၊ ၃း၁၆၊ ၁ကော ၆း၁၉-၂၀၊ ရောမ ၈း၉၊ တမန် ၂း၄၊ ၄း၃၁၊ ၁၁း၂၄။
၄။ စတုတ္ထ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာ ရရှိသောသူသည် တပါးသူထက်
ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားသောသူဖြစ်သည်။ ဆာလံ ၁၂၆း ၅-၆။